“M.top & Harry Online Magic Training” service မေးလေ့ မေးထရှိသည့် မေးခွန်းများ
1. “Mr.top & Harry Online Magic Training” service ဆိုတာဘာလဲ?
What's "Mr.Top & Harry Online Magic Training " service?
 Mr.top & Harry Online Magic Training Service ဆိုတာ MPT အသုံးပြုသူတွေသာ ခံစားခွင့်ရှိသော ဝါရင့်ကျွမ်းကျင်အဆင့် နိုင်ငံကျော် မျက်လှည့်ပညာရှင်ကြီး Mr.topနှင့် Mr.Harryတို့ကိုယ်တိုင် မျက်လှည့်ပညာများကို လေ့လာနိုင်ရန် သင်ကြားပြသပေးမည့် Applicationကောင်းလေး တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုကို MTP SIM cardများဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးချေပြီး ပညာရပ်နှင့် သင်ကြားရေး ဗွီဒီယိုဖိုင်များကို လွယ်ကူချောမွေ့စွာ လေ့လာသင်ကြားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
Mr.Top & Harry online magic training service is the application that can be learn the magic lesson from the veteran expert magician Mr.Top & Harry! Service benefit for the MPT users only! This MPT sim card service provider to learn and watch easily the video .
2. “Mr.top & Harry Online Magic Training” service ကို အသုံးပြုလိုပါက ဘယ်လိုရယူရပါမလဲ။
How can i get the Mr.Top & hArry online magic training sevice?
 ဝန်ဆောင်မှုအား အသုံးပြုလိုပါက 8435 သို့ ON ဟုပေးပို့ပြီး ရယူနိုင်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်) Mr.top & Harry Online Magic Training applicationကို Playstoreမှ တဆင့် download ပြုလုပ်သော်လည်းကောင်း၊ Search Engine မှနေ၍ M.top & Harry Online Magic Training ဟုရိုက်နှိပ်ပြီးသော်လည်းကောင်း ရယူနိုင်ပါသည်။
Message "on" to 8435 to get the service or
Mr.top & harry online magic app can be downloaded from the Google Play store or You can type Mr.top & Harry online magic training from search engine.
3. “Mr.top & Harry Online Magic Training” service ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခမှာ ဘယ်လောက်ပါလဲ။
How much the service fee of Mr.top & Harry online magic training service?
ဗွီဒီယိုဖိုင်များကို ကြည့်ရှုရန် အတွက် နေ့စဉ် ဝန်ဆောင်ခ ကောက်ခံသွားမှာ ဖြစ်ပြီး ဝန်ဆောင်ခ (၉၉) ကျပ်သာကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး ပေးချေရန်အတွက် MPT SIMဖြင့်သာ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
To view videos in the daily fee will be chargedafee (99)kyats, you will only be used to pay for MPT SIM.
4. “Mr.top & Harry Online Magic Training” service ကို?
Mr.top နှင့် Mr.Harryတို့ရဲ့ မျက်လှည့်ပညာပြကွက်ဆန်းများကို ပြကွက်နှင့် သင်ကြားရေး ဟူ၍ ဗွီဒီယိုဖိုင်၂ မျိုးဖြင့် သင်ကြားပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
The special magic lesson of Mr.top & Mr. harry will be taught by2video files with teaching and show!
5. ဗွီဒီယိုဖိုင်ရဲ့အရည်အသွေးကကော ဘယ်လိုမျိုးလဲ?
What is the quality of the video files?
သင့်၏ Phone ၊ Tablet ဖြင့်အဆင်ပြေ ချောမွေ့စေရန် အကောင်းဆုံးသော videoဖိုင်များကို တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
We'll perform the video which facilitate with your phone and tablet.
6. Wifi ဖြင့်ကော ဗွီဒီယိုဖိုင်ကို ကြည့်ရှုနိုင်မှာလား?
Can i see the video with wifi?
7. ဗွီဒီယိုဖိုင်တွေကို ဘယ်လိုရရှိမှာလဲ?
How can i get the video files?
ဝန်ဆောင်ခ ပေးချေပြီးလျှင် applicationအတွင်းရှိ ဗွီဒီယိုဖိုင်များအားလုံးကို စတင်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဝန်ဆောင်ခပေးချေမှုပုံစံမှာ တစ်ရက်သာ ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်သည်။ ဗွီဒီယိုဖိုင်များကို up to dateဖြစ်အောင် ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
You will be able to watch the video files from the application after paying the handling fee. Update video file will be provided to you.
8. ဝန်ဆောင်ပေးချေဖို့ရန် လက်ကျန်ငွေမလုံလောက်ပါက ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲ?
What's going to happen if the remaining amount of the service balance is not enough?
ဝန်ဆောင်ပေးချေဖို့ရန် လက်ကျန်ငွေမလုံလောက်ပါက Magic applicationမှ ဗွီဒီယိုများကို ဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
If the remaining amount of the service balance is not enough, you can't watch the video from magic application.
9. ဝန်ဆောင်မှုအား ရပ်တန့်လိုပါက မည်သို့ပြုလုပ်ရမလဲ။
I'd like to stopaservice. What should i do?
Message "OFF" to 8435 or
You can unsubscribed on web portal of Mr.Top & harry online magic training or Mr.top and harry Online magic training application
ဝန်ဆောင်မှုအား ရပ်တန့်လိုလျှင် OFF ဟုနှိပ်၍ 8435 သို့ပေးပို့ပါ၊ (သို့မဟုတ်)
Mr.top & Harry Online Magic Training application(သို့) Mr.top & Harry Online Magic Training Web Portalပေါ်တွင်လည်း unsubscribeပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
10. အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မည်သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်သနည်း?
How can i contact for the further more details?
Facebook page: https://www.facebook.com/mrtopmagic/
Website Link: www.mrtopmagic.com
Email Address: info@myanmarteleapex.com
Phone Number: 09450577111
Please contact during the office hours!